Ahoana ny fametrahana Kali Linux | Fikolokoloana biolo
1 Inona ny Kali Linux
2 Fepetra takiana mba hametrahana Kali Linux
3 Ahoana ny fametrahana Kali Linux amin'ny solosaina
4 Kali Linux Features
5 Fitaovana lehibe hanananao rehefa mametraka Kali Linux ianao
Raha leo mitady ny fomba ianao apetraho Kali Linux Tonga amin'ny toerana mety ianao, satria amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny fomba hahatratrarana azy. Androany, mahazatra ny mpampiasa maro ny mametraka rafitra fandidiana amin'ny solo-sain'izy ireo hanombanana ny fiarovana sy ny marefo ny rafitr'izy ireo.
Zava-dehibe izany raha jerena ny fitomboan'ny isan'ny hacker solosaina natokana ho amin'ny halatra fampahalalana amin'ny Internet. Ary koa, satria indraindray misy fahalemena eo amin'ny tamba-jotra izay tsy hitanao ara-potoana.
Ho an'ireo tranga ireo, Kali Linux dia misy ny rafitra fiasa izay manova ny fomba fitilian'ny mpampiasa ny tambajotrany. Raha tena te hahalala an'io ianao miasa rafitra apetraho avy eo, dia ho hitanao ny fampahalalana mifandraika indrindra.
Inona ny Kali Linux
Kali Linux dia rafitra miasa amin'ny loharano misokatra noforonina indrindra fanaraha-maso sy fiarovana an'ny tambajotra. Ity rindrambaiko ity dia namboarin'ny Offensive Security Ltd. Izy io koa dia heverina ho mpandimby ny BackTrack, iray amin'ireo rafitra fiarovana solosaina tsara indrindra.
Na dia natao hamoahana loharano misokatra aza ity rindrambaiko ity dia azo antoka tokoa, satria ny sonia fametrahana azy rehetra dia vita sonia GNU mpiambina manokana. Noho izany, afaka matoky tanteraka ianao fa hametraka an'ity rafitra fikirakira ity amin'ny solosainao.
Ho an'ny mifanentana bebe kokoa, ity rafitra fiasa ity dia manana sary ISO ho an'ny processeur 32-bit sy 64-bit. Ankoatr'izay, misy kinova fametrahana ho an'ny solosaina misy maritrano ARM. Misaotra an'io, azo atao ny mametraka an'ity rafitra fandidiana ity amin'ny solosaina rehetra izay manana farafahakeliny takiana amin'ny rafitra.
Ny nahatonga an'io rindrambaiko malaza io dia ny fitaovana fanaraha-maso fanandramana fiarovana mahery vaika. Araka izany, izay manana fahalalana fototra momba ny solosaina dia ho afaka hahafantatra raha niharan'ny cyberattack izy ireo. Amin'ity tranga ity dia ho hitanao koa ny toerana niavian'ny fanafihana solosaina.
Toy izany koa, miaraka amin'ity rindrambaiko ity dia azo atao ny mizaha ireo teboka malemy anananao ao amin'ireo tambajotrao ary hamaha izany. Fisorohana ny fahaverezan'ny vaovao sy ny fanafihana ataon'ireo mpijirika amin'ny ho avy. Izany no antony nahatonga ny Kali Linux ho iray amin'ireo rafitra tsy azo ialana mba hamantarana ireo tambajotra tsy azo antoka na mety tsy hahomby.
Araka ny nankasitrahanao, ny fananana ity rafitra miasa ity dia ilaina hanatsarana ny fiarovana ny solosaina noho izany fitaovana fitiliana diagnostika an'ny tambajotra. Ankehitriny, raha te hametraka ny Kali Linux ianao dia tsy maintsy fantatrao aloha ny takiana fametrahana izay takian'ity rindrambaiko ity.
Fepetra takiana mba hametrahana Kali Linux
Ny rafitra miasa (OS) rehetra dia mitaky loharano maromaro hiasa tsara. Raha ny momba an'ity rindrambaiko ity dia tena ilaina ny loharanon-karena ilainy hampiasaina satria tontolo iainana maimaimpoana io.
Noho izany, raha manana solosaina tena izy ianao izay tsy dia manana loharano firy, dia mety ho azonao atao koa ny mametraka an'io rafitra miasa io. Mba hialana amin'ny fisalasalana, eto ambany no hahalalanao ny takiana amin'ny rafitra Kali Linux amin'ny fametrahana azy:
Intel processeur i386 na amd64 ho takiana farafahakeliny.
1 GB RAM farafaharatsiny. 2 GB atoro anao.
Sehatra kapila mafy 8 GB. 20 GB atoro anao.
Araka ny hitanao, ny solosaina rehetra ankehitriny dia mihoatra lavitra ireo takian'ny rafitra ireo. Na izany aza, tena ilaina ny manamarina fa ny anao farafaharatsiny mahafeno ny takiana farafaharatsiny mba hanaovanao ny fametrahana.
Etsy ankilany, mila mila flash USB farafahakeliny 8 GB koa ianao. Ilaina tokoa ity kapila ity hamoronana haino aman-jery fametrahana USB azo alefa ho an'ny Kali Linux. Ary koa, ianao dia hitaky ny programa Rufus hamadika ny Pen Drive ho kapila fampidinana bootable.
Fampiharana iray hafa izay ilainao ihany koa ny EaseUS Partition Master. Amin'ny ankapobeny ity programa ity dia mpitantana fizarazarana izay hamela anao hizara ny habaka amin'ny kapila mangirana. Ny fampiasana an'ity programa ity dia afaka mamorona partition 20 GB izay hampiasainao hametrahana ny OS Kali Linux. Atao izany mba hitazomana ny rafitra miasa sy ny OS vaovao tianao hapetraka ao amin'ny solo-sainao. Mifanohitra amin'izany no izy, raha ny hevitrao dia ny manafoana tanteraka ny rafitra fandidiana izay tsy maintsy apetraky ny PC Kali Linux dia tsy mila EaseUS Partition Master ianao.
Ahoana ny fametrahana Kali Linux amin'ny solosaina
Ny fametrahana an'ity rafitra miasa ity dia tena mora sy haingana raha vantany vao voamarinao fa manana solo-saina marina ny solosainao. Avy eo, ho fantatrao ny zavatra rehetra ilainao atao apetraho Kali Linux amin'ny PC-nao:
Sintomy avy amin'ny tranonkala ofisialy ny ISO sary avy amin'ny Kali Linux.
Miaraka amin'ny fanampian'ny programa Rufus, mamorona kapila fametrahana USB mampiasa ny sary ISO nakarina teo aloha.
Mamorona fizarazarana kapila mafy hametrahana ity OS ity amin'ny alàlan'ny EaseUS Partition Master.
Avereno indray izao ny PC-nao ary ampidiro ny fikirakira BIOS, apetraho toy ny boot drive "USB" ary tahirizo ny fanovana.
Avy eo, hiverina indray ny PC-nao ary hanomboka ny mpamosavy fametrahana, izay hisafidiananao ny safidy "Fametrahana sary".
Safidio ny fiteny fametrahana ity rindrambaiko ity ary safidio ny bokotra "Tohizo".
Safidio ny faritra misy ny toerana ary kitiho ny "Tohizo".
Avy eo, safidio ny fitambaran'ilay firenena nofidinao tamin'ny fiteny fametrahana Linux Kali ary tsindrio ny "Tohizo".
Ao amin'ny varavarankely manaraka, safidio ny fanaingoana fitendry tianao hampiasaina ary safidio ny bokotra "Tohizo" hanombohana ny fametrahana ny singa.
Vantany vao vita ny fametrahana singa dia ampidiro ny anaranao.
Manaova fanamarihana anarana an-toerana ary omeo teny miafina.
Safidio ny fizarazarana hametrahanao ny programa ary ampifanaraho ireo fitaratry ny tamba-jotra.
Mba hamaranana dia apetaho GRUB ary rehefa vita dia safidio ny bokotra manohy hamerina ny PC-nao.
Ankehitriny dia mila esorinao fotsiny ny fitaovana fametrahana USB hanombohana ny PC-nao. Ataovy ao an-tsaina fa, satria hanana rafitra miasa 2 ianao isaky ny mamerina ny PC-nao dia mila misafidy izay tianao hatomboka ianao.
Ity rafitra fiasa ity dia manana fiasa maro izay nahatonga azy io ho kinova mahomby, matanjaka ary azo antoka amin'ny fizarana misokatra. Ny fiasa miavaka indrindra amin'ity rindrambaiko ity dia:
More from 600 fitaovana fiarovana. Araka ny efa fantatrao, ny teboka matanjaka amin'ity fizarana GNU / Linux ity dia ny fiarovana, noho izany, manolotra fitaovana ho an'ny diagnostika solosaina izy.
Free Version. Maimaimpoana tanteraka ity rafitra miasa ity, ka hahazo ny sary ISO hametraka ny Kali Linux ianao nefa tsy mandoa izany.
Hazo loharano misokatra. Raha tianao ny fandaharana, noho ity fampiasa ity dia azonao atao ny manamboatra kinova an'ity rindrambaiko ity amin'ny fanovana fonosana rehetra.
Voatazona miaraka amin'ny FHS izy io. Ity rafitra miasa ity dia fehezin'ny fenitry ny rafitra fisie. Io dia mamela ny mpampiasa hitady mora foana ny karazan-drakitra rehetra.
Function ho an'ny fitaovana tsy misy tariby. Ity dia iray amin'ireo fiasa miavaka indrindra, satria mamela ny Kali Linux hapetraka amin'ny ankamaroan'ny fitaovana finday na tsy misy tariby any. Noho io fiasa io dia azo atao ny mitondra an'ity rindrambaiko ity amin'ny kapila mangirana USB ary manomboka azy amin'ny PC rehetra.
Kernel novaina nasiana paty fanindronana. Mba hanatsarana ny fiarovana ny rafitra, ny ekipa fampandrosoana dia manatanteraka fanavaozana kernal amin'ny patch farany misy tsindrona.
Tontolo azo antoka ho an'ny mpamorona. Ireo mpamorona an'ity rafitra miasa ity dia manana tontolon'ny fampandrosoana azo antoka hamoronana fanavaozana fonosana miaraka amina protokol fiarovana marobe.
Fiteny maro. Hiditra amin'ny fiteny samihafa ampiasaina amin'ny fizotry ny fametrahana ny Kali Linux ianao na avy amin'ny birao rehefa napetraka.
Tena azo namboarina. Raha te hanova ny interface ianao na ny volavolan'ity rafitra fiasa ity dia azonao atao izany mandra-pahatonganao manana ny fomba izay mitovy indrindra amin'ny tsironao.
Fitaovana lehibe hanananao rehefa mametraka Kali Linux ianao
Raha vantany vao tafapetraka ity rindrambaiko misokatra ity dia mahazatra ny manontany tena hoe inona ny fitaovana fiarovana lehibe anananao? Izany no antony, eto ambany no hahafantaranao ireo fitaovana miavaka indrindra izay natolotry ny Kali Linux rehefa napetraka:
Amin'ity fitaovana ity dia azonao atao ny manova ny adiresy ara-batana amin'ny adapter -n'ny tamba-jotra. Tena zava-dehibe amin'ny diagnostika fidirana tambajotra izany.
ProxyChains. Raha te hitety tranokala samihafa misy proxy isan-karazany ianao mba tsy hanarahana maso dia tokony hampiasa ity fitaovana ity ianao.
Amin'ity fitaovana ity dia azonao atao ny mamantatra ny làlan'ny fifandraisana mandra-pahatonganao any amin'ny toerana niandohany.
Izy io dia fitaovana iray mahomby amin'ny rantsan-tànana ampiasaina hamantarana raha azo antoka ny tranokala.
Raha te hahafantatra ny tompon'ny sehatra web ianao dia tsy mila mampiasa an'io fitaovana io izay manana angon-tahiry fampiantranoana lehibe indrindra.
Ity fitaovana ity dia ampiasaina hanangonana data momba ny olona na ny orinasa ho fanombanana bebe kokoa.
Raha te hijery sy hanadihady ny fiarovana ny seranan-tsambo misokatra, tsy misy tsara noho ny fampiasana an'io fitaovana io.
Dirbuster / Dirb. Raha te hanana rakitra miafina ao amin'ny pejin-tranonkala ianao dia ampiasao ity fitaovana informatika ity.
Araka ny anarany, dia fitaovana enti-miasa amin'ny sarintany, famakafakana ary fikarohana ireo fahasembanana ara-piarovana amin'ny tambajotra.
Rehefa miakanjo ianao, ity rafitra miasa ity dia manana fitaovana maoderina indrindra hahatratrarana fiarovana azo antoka. Toy izany koa, manana birao voarindra tsara ianao izay azonao ampanjifaina araka izay tadiavinao hampifanaraka azy amin'ny zavatra ilainao.
Raha nahasoa anao ity lahatsoratra momba ny fametrahana Kali Linux ity dia aza miandry intsony hanaraka ny bilaoginay. Tsarovy izany, ao amin'ny www.mantenimientobios.com Ho hitanao ny lohahevitra isan-karazany indrindra amin'ny haitao sy ny informatika hahafahanao mametraka ireo programa ilainao.
Previous: Previous post: Ahoana ny fahafantarana ny datin'ny fividianana finday
Next: Next post: Ahoana ny hamafana ny isa SIM